Shiinaha Full Spectrum LED Iftiin Wax ku oolnimada Sarreysa ee Naqshadeynta Naqshadeynta Koritaanka iftiinka LED-ka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Virex
Spectrum Full LED Iftiin Wax ku oolnimada Sare ee Xakamaynta Garaad Naqshad Koritaanka Iftiinka LED
Nalalka koritaanka VIREX LED waxay ku habboon yihiin ganacsiga, beerta guriga, isticmaalka nalalka koritaanka LED waxay hagaajin karaan wax soo saarka dhirta. Nalalkayaga korriinka ayaa leh nashqad kontorool maskaxeed iyo buro Dimming.
VIREX LED Growth Lamps waxay kordhiyaan wax-soosaarka dalagga iyo badbaadinta tamarta iyadoo leh iftiin sare oo iftiin leh iyo iftiin yar, kaa caawinaya inaad gaadho tayada iyo tirada ugu badan.
Iftiin korriin la isku hagaajin karo iyo muuqaal buuxa, iftiinka iftiinka ayaa si xor ah loo hagaajin karaa marxalado kala duwan iyadoo loo eegayo baahida koritaanka dhirta, nalka ugu muhiimsan waa sahlan tahay in la xakameeyo, oo ku habboon beerashada ganacsiga iyo guriga.
Looxa iftiinka waa la xidhay si aadan uga welwelin xaaladaha sii kordhaya ee qoyan ee saameeya iftiinka dhirta.
Laablaab dabacsan, fududahay in la rakibo oo la guuro, gurigaaga ilaali. Qaab dhismeedka la hagaajiyay, walxo la cusboonaysiiyay, miisaan fudud, rakibid iyo isticmaal ku habboon. Ku habboon beerista guryaha, teendhooyinka ama saqafka.
1. Shahaado: Shahaadada ETL/DLC ee dhammaan alaabta
2. Spectrum: spectrum buuxa
3. Dimming:Naqshadaynta kontoroolka caqliga leh iyo buro-dhimista
4. Ku haboon danab buuxa 100-480V
5. 50000saacadood: Wakhtiga cimriga dheer: L90:>50000saacadood
Magaca Alaabta VIREX LED Iftiin Koritaanka
Qodobka Awoodda >95%
Gelida Voltage 100-277V/277-480V
Heerarka biyuhu celinayaan IP66
1. Waxaan aqbalnaa amarka yar, waxaad dhigi kartaa amar yar si aad u tijaabiso alaabtayada.
2. Waxaan bixinaa dammaanad 3-sano oo caadi ah, markaa xor ayaad u tahay inaad noogu soo dirto iimayl haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid. Aad ayaan ugu farxi doonnaa inaan ku caawinno.
3. Dhammaan alaabtayada ayaa si taxadar leh u tijaabin doonta waaxdayada QC si loo hubiyo tayada heerka sare.
Q2: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
Q3: Sideed u rartay alaabta? Ilaa intee ayay qaadanaysaa?
J: Sida caadiga ah marka la isticmaalo degdeg, badda iyo tareenada. Waddamada kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan. Iyada oo ku xidhan doorashadaada, express caadi ahaan waxay qaadataa 5-7 maalmood, badda iyo tareenada waxay qaataan qiyaastii 25-45 maalmood.
Xiga: Kori Teendhada Beerta Gudaha ee Tayada Tayada Sare 120*120*200 CM
Naqshad Kordhinta Koontaroolka Sirdoonka Iftiinka ee LED 660 L...
VIREX LED Iftiin Koritaanka Isticmaalka Laydhka Koritaanka ee Indo...